Ungayisebenzisa njani imowudi emnyama kwi-App yam ye-Instagram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyenza njani imowudi emnyama kwisicelo sam se-Instagram?
Epreli 26, 2021 0 IiCententarios 306
Okwangoku phantse zonke izicelo zemidiya yoluntu basebenzisa imowudi emnyama okanye imowudi yasebusuku phakathi kokukhetha kwayo, le modeli yasebusuku ibenze babanomtsalane ngakumbi kubasebenzisi, kuba uninzi lwabo alungenisanga izicelo ebusuku kuba ukukhanya kwemowudi ecacileyo kuyabakhathaza kwaye kwezinye iimeko kubabangele iingxaki ngamehlo .
Kwimeko ye-Instagram Singakuxelela ukuba yayisisicelo sokugqibela ukwamkela imo yasebusuku, kodwa ngaphandle kokuba ingowokugqibela ukusisebenzisa, sesinye sezicelo esijongeka silunge ngakumbi kulo mbala, ngaphandle kwamathandabuzo imowudi emnyama yongeza Ndichukumisa esi sicelo ngobuhle.
Kwimeko yeefowuni ezine Itekhnoloji ye-Android 10, Kulula kakhulu kuba ungayenza ngeselula uqobo, kuba ezi zixhobo zobuchwephesha zihambele phambili phakathi kokukhetha inkqubo yescreen yefowuni.
Ukuba ufuna ukwenza imowudi emnyama kwi-Instagram ngaphandle kokuchaphazela ezinye izixhobo zeselfowuni, ungayenza ngale ndlela ilandelayo:
Ngena Ukusetyenziswa kwe-Instagram kwifowuni ephathekayo, usebenzisa igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Zibonakalise kwiprofayili, ukhethe useto lwesicelo ukhetho, oku kubekwe kwinxalenye ephezulu yesikrini, ephawulwe ngayo imivimbo emithathu ethe nkqo.
Nje ukuba ukhetho luboniswe, kuya kufuneka ucofe kwiseto se icon yesixhobo esiphathwayo. Cofa kwi icon.
Xa ukhetho loqwalaselo lwesixhobo esiphathwayo luboniswa, kuya kufuneka ukhethe kwaye ukhethe icandelo elibiziweyo "Umxholo", Oku kuyakukuphambisela kuthotho olutsha lweenketho apho kuya kufuneka ukhethe indlela emnyama.
Ngale ndlela unokwenza imowudi emnyama I-app ye-Instagram kuphela.
Ukuba awunayo i-Android 10:
Kwimeko apho ungenayo iselfowuni ngale teknoloji, into onokuyenza kukunyanzela imo yasebusuku yesicelo usebenzisa usetyenziso, olona lucetyiswayo yile:
Esi sicelo kulula ukusisebenzisa, wakube ukhuphele kwaye usifake ngokuchanekileyo kwisixhobo sakho esiphathwayo, kuya kufuneka ulandele imiyalelo eya kukunika yona ukuze uyisebenzise njengotshintsho ukwenza i Imowudi yobusuku kwi-instagram kunye nolunye usetyenziso, oluhambelana nayo.
Indlela yokusebenzisa esi sicelo:
Into yokuqala ekufuneka uyenzile, njengoko sibonisile ngasentla, yile khuphela kwaye ufake isicelo ngokuchanekileyo kwisixhobo sakho esiphathwayo.
Qiniseka ukuba usebenzisa inguqulelo yamva nje ye- InstagramUkuba akunjalo, kuya kufuneka uyihlaziye.
Nje ukuba ufake isicelo seMnyamaMode uyakuqaphela ukuba inamacandelo emva kokukhetha. Kule meko, kufuneka ukhethe lowo ubiziweyo "Imo yasebusuku". Oku kuya kusetyenziswa ukwenza imowudi emnyama kuzo zonke iinkqubo zenkqubo yokusebenza yezixhobo.
Kwimeko apho ufuna ukwenza imowudi emnyama kwi-Instagram kuphela, kuya kufuneka ukhethe icandelo elibiziweyo "Indlela yemini" yiyo loo nto.
1 Isebenza njani:
2 Ukuba awunayo i-Android 10:
3 Imowudi emnyama:
Ukwazi njani ukuba bendivaliwe kwiTelegram?
Cima iiakhawunti ze-Facebook.